Home » Apụta » Calrec Debuts New Impulse Core na NAB Gosi New York
Isi ihe a na-eme bụ ihe dị egwu na-arụ ọrụ na nhazi ngwaọrụ na AES67 na SMPTE Njikọta 2110. Site na njikwa njikọta site na IP, nkwụsị nwere ike ịbụ ebe dịpụrụ adịpụ ma jikọọ na netwọk ọkọlọtọ na-eji kuki COTS. Nkà na ụzụ a na-eme ka ndị ahịa Calrec gbanwee ọkpụkpọ ọgbọ ọzọ (NGA) na ihe gbasara IP, ma mee ka ha nwee ike ime nke a n'ejighị ọrụ mmepụta ihe.
"Isi ihe a na-eme bụ nkwupụta DSP siri ike ma dị egwu nke na-adaba na atụmatụ Calrec ga-eme n'ọdịnihu, ka anyị na-anọgide na-emepụta ma na-enye ndị ahịa anyị ụzọ mmelite na-enweghị ike isi nweta nkwalite usoro IP," ka Dave Letson, Calrec's VP of Sales kwuru. "Ka IP na-abawanye, ọ bụ ihe mgbaru ọsọ Calrec iji belata ego nke mgbanwe a ma mee ka ọ bụrụ ahụmahụ dị mma maka ndị dị adị na ndị ọhụrụ na-achọ ịkwalite mmemme ọrụ ọhụrụ."
Mmetụta na-enye 3D immersive ụzọ widths na panning maka ngwa NGA, 5.1, 5.1.2, 5.1.4, 7.1, 7.1.2 na 7.1.4 ntinye ụzọ ntinye, busses, nlekota na nhazi. Ọ nwere onye na-ahụ maka TETA, nke na-akwado nchoputa NMOS na njikwa njikọ, yana nchọpụta mDNS / Ravenna. A pụrụ ijikọta cores abụọ 5U impulse iji nye redundancy zuru ezu ma nwee ike ịdị na-adịghị anya site na ibe ya maka mgbake.
Na mgbakwunye na isi ihe dị mkpa, Calrec ga-egosipụta ụdị Ụdị R, expandable, usoro mgbasa ozi dabeere na IP na ngosi. Ụdị usoro nchịkwa nke R na-agụnye nanị akụkụ atọ nke ihe osise: paner nke fader, otu nnukwu nchịkwa na otu obere ngwugwu. Ihe 2U dị mfe nke na-enyere I / O aka na-enye ndị ahịa ohere ịbanye ma na-agba ọsọ ozugbo. Otu onye nwere ike ịme ihe ruru atọ na-ejikọta gburugburu ebe obibi, n'enweghị òkè nke DSP. Ikike iji igwefukota agwakota jikọtara ya na nkwekọrịta nke netwọk AES67 na-enye ohere zuru oke iji gbochie ngwa ngwa mgbanwe nke redio.
Calrec kwalitere Brio consoles na ike gbasaa ọwa ga-egosikwa na NAB NY. Mgbasawanye ọhụụ na - eme ka Brio12 DSP gụọ site na 48 gaa na ntinye ndenye 64 na Brio36 si na 64 gaa na ntinye ntinye 96. Nhazi Mgbasa DSP dị maka nkwonkwo Brio niile na v1.1.6 software ma ọ bụ karịa; nkwalite ngwanrọ na-enweghị nnwere onwe na-esote aha Brio www.calrec.com/brioregistration.
Calrec Audio na-etinye onwe ya kpamkpam maka ịdị mma n'ịgwakọta egwu maka ikuku ma na-ebi ndụ. Onye ọkachamara mgbasa ozi maka ihe karịrị afọ 50, Calrec emepụtawo ọtụtụ mgbakọ dijitalụ nke ndị mgbasa ozi kasị nwee ọganihu nke ụwa kwadobere. Na-arịwanye elu. ihe nkasi obi bụ ihe dị mkpa na netwọk dị na ụlọ ọrụ, na-ebute mmemme arụmọrụ na-edozi, akụ ndị nwere ego na ikike nke ịgbasa ngwa ngwa. Site na mmalite, Calrec emepụtawo ngwọta dị iche iche nke nyere ndị mgbasa ozi aka ịzụlite usoro ọrụ ha ma nweta uru dị ukwuu site na ngwá ọrụ ha. Maka ihe ngwọta ntanetị, ndị mgbasa ozi na-atụkwasị obi na Calrec. Enwetakwu ihe ọmụma dị na calrec.com.
soro Calrec Audio:
All ụghalaahịa pụtara n'isiokwu a bụ ihe onwunwe nke ndị nwe ha.
2015 bitrate Mbelata Broadcast Engineer Broadcast Engineering Calrec Audio Control System H264 / H265 HDR HDR / WCG HEVC HEVC / AVC immersive isovideo JCT-VC mkpọtụ Mbelata Ụgha & Akụrụ UHD / 4K / HD Ultra HD Forum viarte video Engineer Warsaw	2018-10-11
Previous: Enyi MTS na-ahọpụta Justin Paul dị ka Chief Marketing Officer
Osote: Arvato Systems na-enweta nnukwu mgbasa ozi mgbasa ozi & ọrụ nchịkwa ikike na RTÉ Ireland